#8 စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ချဉ်းကပ်မှု | Mycanvas
ပုံမှန်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းကိုဘယ်သူ့ကိုပြောပြလေ့ရှိသလဲ? သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေဆီကပဲ အကြံဉာဏ်တောင်းဖြစ်မှာပါ။ သူတို့ကိုပြောပြခြင်းဟာ သင်ရင်ဖွင့်ဖို့၊ စိတ်သက်သာရာရဖို့သာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာအဲ့ဒီ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ထက်အသက်ကြီးပြီး အတွေ့အကြုံပိုများတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောသင့်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သင့်ထက်အတွေအကြုံအများကြီးရှိတဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေခိုင်လုံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – သင့်ရဲ့မိဘတွေဟာ မတူညီတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေကြည့်ပြီး သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင်ဘယ်သူတွေနဲ့အတူတူသောက်စားလေ့ရှိသလဲ ?? ယခင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အတိုင်းသင်၏ကုမ္ပဏီမှ သင်နဲ့ရွယ်တူချင်းတွေနဲ့အတူသောက်စားမယ်ဆိုရင် သင့်အမြင်ကျဉ်းမြောင်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ဝိုင်းကိုချဲ့နိုင်ရန် သင်ရဲ့ကုမ္ပဏီပြင်ပမှာရှိတဲ့သူများနဲ့ပဲသွားသောင်သင့်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ့အပြင် သင့်ကုမ္ပဏီမှာလည်း သောက်ရတာမကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တဲ့အတွက် ညနေအလုပ်ဆင်းတဲ့အချိန် သွားသောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ မနက်စောစောအားလပ်ချိန်မှာ တစ်ခုခုသွားစားတာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။ နံနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာ သူတို့နဲ့ဘယ်လို ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ။
အခုကစပြီးစုဆောင်းကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သင့်ကို ငွေစုဖို့အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ပေမယ့် သင့်မှာကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဏာရေးအတွက် သင်ယူလေ့လာတတ်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ငွေများများရလာလေ သင့်အရင်းအနှီးကိုမည်သို့အပြည့်အဝအသုံးချရမည်ကိုသင်ပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စဉ်းစားနိုင်လေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ စတော့ရှယ်ယာ, အာမခံ, ကား စသည်တို့ကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနိုင်ပါတဲ့အတွက် ပိုက်ဆံအကြောင်းကိုပိုပြီးလေ့လာပါ။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်လေ့လာသိရှိထားတဲ့အရာတွေဟာ သင့်ရဲ့ဘဏ္ဏာရေးဆိုင်ရာတတ်မြောက်မှုကိုတိုးတက်စေပြီး ရေရှည်မှာလည်း သင်ရဲ့အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းကိုလည်းတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
တစ်နှစ်အတွင်း Convenience Store ဆိုင်တွေမှာ သင်သုံးခဲ့တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို သင်ပြန်တွက်ကြည့်ပါ။ ဒါဟာလူအများစုအတွက်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့နေ့စဉ်သုံး အသေးစားကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဂရုမစိုက်တတ်တာကကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြံဥာဏ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်နေ့စဉ်ငွေမည်မျှအသုံးပြုသည်ကို သင်သိနိုင်ရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်လက်ရှိ ဘယ်အရာတွေမှာငွေအသုံးပြုနေလဲဆိုတာမသိရှိပါက သင်ငွေစုဆောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်ကို သင်ပြန်တွက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ သင့်ရဲ့ Cash Book ထဲမှာ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာအသုံးစရိတ်ကို မှတ်သားထားခြင်းဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။